Relationship Archives - Page 22 of 51 - Lifestyle Myanmar
သင့်ရဲ့ Soul သင်္ကေတဟာ ဘာဖြစ်မလဲ? သင့်ရဲ့ မွေးလမှာ အဖြေရှိပါတယ်
သင့်လက်တွဲဖော် လိမ်ပြောနေကြောင်း သိနိုင်တဲ့ အချက်ပြ (၉)ခု
ချစ်သူကိုနွေးထွေးမှုပေးနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအရာတွေလုပ်ဆောင်ပေးရမလဲ ?
သင်ဟာ အတွေးလွန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ အလေ့အထ (၁၀)ခု
ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ သင့်ကို ကူညီနိုင်မယ့်ငိုကြွေးခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအရ အကျိုးကျေးဇူး (၅) ချက်
Green Tea ကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
ရှေ့ဆက်မျှော်လင့်လို့မရသော အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာ (၆) ချက်
ဘယ်တော့မှ ဇနီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်တဲ့ လွယ်လွန်းသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာများ
အိပ်မက်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သင်သိထားသင့်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက် (၁၅)ချက်
Home Category Relationship
ဗီယက်နမ်မှ အနုပညာရှင် Luong Thuy ဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စုံတွဲတွေကြားက ဟာသဆန်တဲ့ နေ့စဉ် တုံ့ပြန်မှုလေးတွေကို ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းလေးတွေအဖြစ် ရေးဆွဲတတ်သူ တစ်ဦးပါ။ သူမရဲ့ ပင်တိုင်ရုပ်ပြ ဇာတ်လမ်းတိုတွေဟာ လူတိုင်းနီးပါး ခံစားလို့ရတဲ့ ရုပ်ပြလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ရုပ်ပြလေးတွေက သင်ချစ်ရတဲ့သူကို သတိရစေပြီး တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် သင့်ကိုပြုံးစေမှာ သေချာပါတယ်။ ၁။ ၂။...
လူတွေဟာ ကိုယ့်အပေါ် လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်မယ့် လက်တွဲဖော်တွေကို ဘာ့ကြောင့် ရှာဖွေကြသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ခု
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နေချိန်မှာ တချို့အမျိုးသမီးတွေကတော့ ကိုယ့်ကို လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်မယ့် လက်တွဲဖော်ကိုသာ နှစ်သက်ကြဆဲပါ။ သုတေသနပြုချက်အရ ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ တာဝန်ယူပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံး ချပေးမယ့် လက်တွဲဖော်တစ်ဦးကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသိစိတ်ဖြင့် ရှာဖွေမှု ပြုကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ ကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်တဲ့ လက်တွဲဖော်တွေကို စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးက ဒီနေရာမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်...
ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ နှလုံးသားကို အရည်ပျော်ကျသွားစေနိုင်လောက်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အပြုအမူများ
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အားနွဲ့သူတွေအပေါ်မှာ ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ယဥ်ကျေးပျူငှာစွာ ဆက်ဆံတတ်တဲ့ အမျိုးသားဆိုတာဟာ စာအုပ်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ ယနေ့ခေတ်အမျိုးသမီးတွေက ယုံကြည်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလိုမျိုး စိတ်ကူးယဥ်ဆန်တဲ့ အမျိုးသားကောင်းတွေလည်း လက်တွေ့လောကမှာ ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ မယုံမရှိပါနော်။ အမျိုးသားထုထဲကမှ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ရင်ခုန်သံကို မြန်စေမယ့် တကယ့်အမျိုးသားကောင်းတွေဟာ လက်တွေ့လောကမှာ သေချာပေါက်ရှိနေပြီးတော့ သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေက ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးလိုက်ပါပြီ။ ၁။ အလိုက်တသိ တံခါးဖွင့်ပေးခြင်း...
သူက ကိုယ့်အပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းအဆင့်ထက်ပိုပြီး ခံစားချက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာများ
ကျွန်မတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေဟာ များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ဘဝထဲက အရင်းနှီးဆုံးလူတစ်ချို့ဖြစ်ပြီးတော့ ရုတ်ချည်းဆိုသလိုပဲလည်း သူတို့အပေါ်ချစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ မယုံမရှိပါနဲ့။ လက်ရှိမှာလည်း သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ အချိန်အကြာကြီး တရင်းတနှီးရှိနေရာကနေ ချစ်သူဘဝပြောင်းသွားတဲ့ စုံတွဲလေးတွေလည်း အပြင်လောမှာ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်အပေါ်မှာ ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးရှိနေသလဲဆိုတာကို သေချာသိနိုင်ဖို့အတွက် အခုပြောပြပေးမယ့်အချက်လေးတွေကို ဖတ်ထားကြည့်လိုက်ပါ။ ၁။ အကူအညီပေးတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာမဆို သင့်အပေါ်မှာ အကူအညီပေးမယ်ဆိုတာကတော့ ငြင်းဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်း...
ဘာကြောင့် ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေထက် သူစိမ်းတွေအပေါ်မှာ ပိုပြီးကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံတတ်ကြတာလဲ
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လူတစ်မျိုးစီနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ဆက်ဆံပုံ၊ ပြုမူပုံတွေလည်း ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြပြီးတော့ အခုလိုပြောင်းလဲမှုကို အမြဲတမ်းတော့ သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။ ဘာကြောင့် ကိုယ့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ လူတွေပေါ်မူတည်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အပြုအမူတွေက ပြောင်းလဲသွားကြတာလဲ၊ ဘာကဒီလိုဖြစ်လာစေသလဲဆိုတာကို အခုပဲပြောပြချင်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်သမျှကို သည်းခံနိုင်လောက်တဲ့အထိ ရင်းနှီးတယ်လို့ တွေးထင်ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်ခါတစ်ရံဆိုရင် တွေ့ရာလူ၊ အသိတွေ သိုမ့ဟုတ် သူစိမ်းတွေနဲ့ အချိန်အများကြီး ကုန်ဆုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။...
စကားလုံးတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်တွေကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ
အချစ်လို့ခေါ်တဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ခံစားချက်ကြီးကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖော်ပြတတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကဗျာတွေ၊ သီချင်းတွေ သီဆိုစပ်ကုံးပြီးတော့ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို အားလုံးသိအောင် ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ‌တော့ ကိုယ်လုပ်တာက မှန်မမှန် ထိရောက်မှုရှိမရှိကို သေချာကွဲကွဲပြားပြား မသိကြပါဘူး။ အခုပြောပြပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကတော့ ကိုယ်ပြောနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေထက်ပိုပြီးတော့ အဓိပ္ပာယ်နက်နဲစွာနဲ့ အချစ်ကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကို အနားယူချိန်ပေးပါ။ တစ်နေ့တာလုံး ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်လာချိန်မှာတော့ ချက်ချင်းကြီး...
ဖခင်တွေအနေနဲ့ ၉လမလွယ်ခဲ့ရပေမယ့်လည်း မွေးကင်းစကလေးနဲ့ သံယောဇဉ်ခိုင်မြဲစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၁၀)ခု
ဖခင်တွေဟာ များသောအားဖြင့် မိခင်တွေလောက် မွေးကင်းစကလေးနှင့်အတူ ရင်းနှီးမှုသိပ်မရှိကြပါဘူ။ မိခင်တွေအနေနဲ့ ၉လလွယ်ထားရတာကြောင့် ဘေဘီလေးနဲ့ ဆက်သွယ်မှုက ပိုပြီး လွယ်ကူစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖခင်တွေလည်း သူတို့လေးတွေ မမွေးဖွားရသေးခင်မှာ ရင်းနှီးမှု ရယူလို့ ရပါတယ်။ ဖခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ဘေဘီလေးရဲ့ အနာဂတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ဖခင်လောင်းတွေအားလုံးကို မွေးကင်းစ ရင်သွေးလေးနှင့် တတ်နိုင်သမျှ အနီးကပ်ရှိစေလိုပါတယ်။...
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာထက် အသက်ကြီးမှ အိမ်ထောင်ရေးကို ဘာလို့စဥ်းစားသင့်တာလဲ
ယနေ့ခေတ်မှာ လူငယ်အများစုဟာ ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းကတည်းက အိမ်ထောင်ပြုနေကြပြီဆိုတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေကတော့ အသက် ၃၀ နားကပ်နေပြီ သို့မဟုတ် ကျော်နေပြီဆိုပေမယ့်လည်း အိမ်ထောင်မပြုသေး၊ ရည်းစားမထားကြသေးလို့ သူများတွေရဲ့ လှောင်ပြောင်ခြင်းကို ခံနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ တကယ်တမ်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ နောက်ကွယ်က အကျိုးအကြောင်းတွေကို သေချာမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် အသက် ၃၀ နားကပ်နေပြီ၊ ကျော်နေပြီဆိုပေမယ့်လည်း အိမ်ထောင်မပြုဖြစ်သေးလို့...
လောကမှာ ကိုယ့်အတွက် အရာရာကို အမြဲနားလည်နိုင်ပြီး ချစ်ခင်ပေးနိုင်တာ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပါ။ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဖက်မှာ အမြဲရှိပေးပြီး ဘယ်လောက်ပဲ တခြားလူတွေက ကိုယ့်အကြောင်း မကောင်းသတင်းတွေပြောပြော ကိုယ့်ကို အားပေးနှစ်သိမ့်စကားတွေကို ပြောပေးတာဟာလည်း မိသားစုဝင်တွေပါပဲ။ အခုလိုမျိုး ကိုယ့်ဘဝအတွက် အရာရာဖြစ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အချိန်အကြာကြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရယ်၊ ပိုပြီးကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံတွေ့ပြီး စကားပြောပါ။ သိပ်ပြီးအရေးမကြီးတဲ့...
ငယ်စဥ်အချိန်ကတည်းက ကြားသိလာခဲ့ရတဲ့ ပုံပြင်တွေကြောင့် အချစ်ဆိုတာကို ကြားသိလာခဲ့ရတာြဖစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်၊ တူ၊ တူမလေးတွေအလှည့်ကျပြန်တော့ သေချာနားလည်ဖို့အတွက် ပြန်သင်ပေးရမှာက ကိုယ့်တာဝန်ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာက ပုံပြင်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေထဲကလို Happy Ending တွေချည်းဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်လို့ မှန်ကန်တဲ့အချစ်စစ်ကို ရှာတွေ့နိုင်စေဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုးဆုံးမစကားလေးတွေ ပြောပြထားရမလဲဆိုတာကို အခုပဲစကားလက်ဆောင်ပါးပေးလိုက်ရပါတယ်။ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုပ်တာဟာ အချစ်မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ရဲ့ကလေးက အိမ်ကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ပြန်လာပြီး အခြားကလေးတွေက သူ့ကိုစတယ်ဆိုတဲ့အကြာင်းပြန်တိုင်တဲ့အခါမှာ ချစ်လို့စတာပါဆိုပြီး စကားကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မပြောလိုက်ပါနဲ့။...
Page 22 of 51 Prev 1 … 21 22 23 … 51 Next